‘जिन’ सम्पादन गर्ने चिनियाँ वैज्ञानिक पक्राउ ?
आज : २०७६ असार १२, बिहीबार / Thursday, Jun 27, 2019
काठमाडौं । विज्ञानको ठूलो उपलब्धी बताउँदै पहिलो पटक दुइवटा मानव भ्रुणको वंशाणु (जिन) को सम्पादन गरि बच्चा उत्पादन गर्न सफल भएको दाबी गर्ने चिनियाँ वैज्ञानिक हे जियानकुइ अकस्मात हराएका छन् । उनलाई चिनियाँ अधिकारीले पक्राउ गरेको खबरहरु बाहिरिएको छ ।
जियानकुइले अघिल्लो साता हङकङमा क्रिश्पर प्रविीधबाट मानव जिनको सम्पादनको प्रयोग गरेको बारे एक कार्यक्रममा प्रस्तुती दिएपछि चिनियाँ अधिकारीहरुले यसको निन्दा गरेका थिए । त्यस लगत्तै उनी हराएको खबर आएको छ ।
उनी पूर्व कर्मचारी रहेको शेन्जन विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले अहिले जियानकुइबारे कुनै सूचना नभएको र केहि सूचना आएमा आधिकारीक माध्यमबाट यस बिषयमा जानकारी दने बताएका छन् ।
शेन्जन विश्वविद्यालयका अध्यक्षले नै उनलाई पक्राउ गरि फर्काउन लगाएको चीनको स्थानिय समाचार संस्थाहरुको दाबी रहेको छ ।
जियानकुइले केहि समयअघि आफुले जिन सम्पादन गरि बच्चाको उत्पादन गराएको खबर बाहिरिएसँगै यस विषयमा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको थियो । कतिपयले यसलाई गलत कार्य भनिरहेका छन् । यस्ता बच्चाहरुको गुण कस्तो हुने र त्यसपछिका बच्चा कस्तो हुने भन्ने कुनै यकिन नभएकोले यो अनुसन्धान नै गलत भएको दाबी गरिएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार १३:०१:०० मा प्रकाशित
चिनियाँ कम्पनीले गर्यो फाइभ–जीका २५ सम्झौता
शेनजेन । चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसनले विश्वभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवासम्बन्धी २५ वटा व्यावसायिक फाइभ–जी सम्झौता गरेको मंगलबार
आठ सयभन्दा बढी घर विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर
बेझाड, ६ असार । रामपुर नगरपालिकाभित्रका आठ सयभन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुग्न सकेको छैन । नगरका वडा नं १, २, ३, ४, ९ र १० का गरी ८३३ घरधुरी
के हो फेसबुकले ल्याउन लागेको डिजिटल मुद्रा लिब्रा ?
फेसबुकले अर्को वर्ष लिब्रा नाम दिइएको एउटा नयाँ डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सोसल मिडिया कम्पनीका अनुसार त्यस्तो
बिजुली विहीन बैतडीका स्थानीय तह
बैतडी, ३० जेठ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका नगरपालिकामध्ये पुर्चौडी र मेलौली नगरपालिकामा अझै बिजुली
अमेरिकी 'टिभी शो' मा श्रुति हसन
सलमान खान फसे कानुनी झमेलामा
विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा के छ ?
बुबाको हत्या गर्नेलाई एक लाख जरिवाना, १० वर्ष कैद
साढे २३ हजार दिएर उपमेयरले छोरा हेर्न पतिलाई दिइन जागिर